Inotsanangurwa Nongedzo yekushandisa maPodcast pane Apple Tarisa | IPhone nhau
Yekupedzisira Nhungamiro yekushandisa maPodcast pane Apple Watch
Miguel Hernandez | | iPhone, Noticias, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Podcasts chaive chimwe chekushandisa kwakanyanya kukumbirwa nevashandisi veApple Watch, zvechokwadi zvinotiomera kuti tinzwisise kuti nei chikumbiro chakadai chisipo kubva panguva yekutanga. Iine watchOS 5 zvese zvinogoneka, ndosaka Tinokuunzira iwe chingave chiri chechokwadi gwara kuti uwane zvakanakisa kubva maPodcasts kubva kuApple Watch yako.
Vazhinji vashandisi vanosarudza yemuno iOS application kuti vateerere maPodcasts avo avanofarira, uye ikozvino nekuuya kweWatchOS zvese zvinowedzera kureruka. Saka, tsvaga nesu zvese zvaunogona kuita shandisa Podcasts zvakananga paApple Watch zviri nyore uye nekukurumidza.
Mune ino kesi hatifanire kubata chero chinhu zvachose, kana isu takaisa watchOS 5 pane yedu Apple Tarisa uye isu zvakare tine iyo iPhone yakagadziridzwa kune chero vhezheni yeIOS 12 isu tichava nyore kuti iyi yemuno application ishandiswe nekutadza. Nekudaro, isu tine mashoma mashoma esarudzo ayo isu atinogona kudzora, kubata uye kunatsiridza kuburikidza ese ari maviri michina, nekudaro tichaenda kushandisa zvese zvirimo zvekutarisa zviripo pane yedu iPhone, pamwe nePodcasts application iripo pane Apple Watch, kusiira zvese kune zvatinoda, izvi ndizvo zvinhu zvese zvaunogona kuita.
1 Maitiro ekudhawunirodha maPodcast edu paApple Watch
2 Maitiro ekuwana iyo Podcast kubva kuApple Watch
3 Maitiro ekuwedzera chinetso chePodcast kuApple Watch
4 Maitiro Ekutamba Podcasts pane Wireless mahedhifoni kana kuburikidza neLTE
Maitiro ekudhawunirodha maPodcast edu paApple Watch
Chinhu chikuru ndechekuti maPodcasts awanikwe, nekuti mukana wekunyorera watchOS 5 ndezvekuti hatizodi iyo inoshanda iPhone kuti iite semubatanidzi pakati pePodcasts nemahedhifoni edu, ndiko kuti, inopfuura zvinopfuura izvo yakapusa multimedia controller. Iyo Apple Watch inotora pasi edu akanyoreswa maPodcast atisina kumbonzwa mune yemukati ndangariro, uye nekudaro zvichatibvumidza kuti tizviwane zvirinyore tisingaite chero chinhu zvachose.
Kuti tiite izvi isu tinongofanirwa kuisa yeWatch application uye tigoenda kuPodcasts application, mukati mayo zvinotibvumidza kuti tishandure kumisikidzwa kwe «Wedzera zvikamu zve ...», iyo inoita seiyi
Inzwa: chete episode yatiri kuteerera kana mu «Teerera» runyorwa ndiyo inopfuudzwa
Yakagadzirirwa: Isu tinosarudza zvikamu zvipi zvinoteedzerwa otomatiki mundangariro dzeApple Watch, tichidzidzima patakatotamba napo zvizere.
Zvakare isu tinofanirwa kumisikidza switch yeaya atinoda kutorwa pasi, Pamusoro pezvo, kurodha pasi uku kuchaitwa chero nguva iyo Apple wachi ichichijaja uye mukati meinozivikanwa netiweki yeWiFi, kungave kana kwete zvakabatana zvakananga neiyo iPhone, yakasununguka zvisingaite.
Maitiro ekuwana iyo Podcast kubva kuApple Watch
Kana tangopinda muApple Watch Podcasts application isu tine sarudzo mbiri dzekutamba zvirimo, kuburikidza neApple Watch ndangariro, kana kungoshandisa iyo Apple Watch sebhiriji pakati peiyo iPhone nePodcasts application. Kana isu tavhura kunyorera zvakanangana, chifukidziro chedu chakanyanya kuterera kuPodcast chichaonekwa muchitsauko chayo chiripo, asi isu tinofanirwa kutsvedza kubva kumusoro kusvika pasi kuti tiwane sarudzo mbiri dzinotibvumidza kusarudza iyo Apple Watch zvakazvimiririra.
Pane iyo iPhone: Iyo inotibvumidza isu kuti tikurumidze kuwana iwo marondedzero atakagadzira paApple Watch, ese iwo asina chero mhando yemuganhu: Teerera; Zvirongwa; Zvikamu nezviteshi. Zvakare netab "Zvino zvinonzwika ..." ichavhurika kumusoro kana isu tine imwe yekumbomira.
Raibhurari: Apa ndipo patichakwanisa kukurumidza kuwana iwo maPodcast atakagadza nguva yadarika, iwo anotorwa otomatiki kuneyemukati ndangariro yeApple Watch uye izvo zvinodzimwa kana tangovateerera.
Ndiwo maitiro Iwe unogona kuwana zvirimo zvePodcasts zvakananga kuburikidza nekushandisa kwedu iPhone.
Maitiro ekuwedzera chinetso chePodcast kuApple Watch
Imwe mukana wekuve neyepamutemo Podcasts kunyorera paApple Watch ndizvozvo isu tichakwanisa kuwedzera yako kuomarara, Kunyangwe maneja akangwara weSiri sphere achizopa iyo kwatiri kana ikawana patani mukushandisa kwedu, tinogona zvakare kuwedzera Podcasts icon sechinetso kune izvo zvinopihwa neApple nechinangwa chekuti tinogona kukurumidza kuwana iko kunyorera uye nekudaro titange. mabudisirwo, aya matanho aunofanirwa kuteedzera kumisikidza iwo:
Kune izvi isu hatitombove neizvozvo pinda iyo «Matambudziko» chikamu cheWatch application, zvinokwana kuisa kusarudzwa kwenzvimbo uye kuenderera mberi nekuzvigadzirisa. Mukati mechikamu chematambudziko epamutemo emawere isu tine zvakananga kuomarara kunonzi «Podcasts», uye otomatiki nenzira iyi icon ichaverengerwa sediki diki kana tikazviwedzera muchikamu chidiki, kana nekusiyana isu tinosarudza "Center" Pakusarudza kuomarara, tichaona zita rePodcast pamwe nechikamu chaicho chatiri kutamba. Ngazvive sezvazvinogona, zvichave zvakafanira kubata kuomesa kuvhura mutambi wacho zvakananga.
Maitiro Ekutamba Podcasts pane Wireless mahedhifoni kana kuburikidza neLTE
Kuburitsa zvirikutamba mu «Podcasts» kuburikidza neAirPods zviri nyore kwazvo, inogara nhaka zvakafanana mushandisi interface senge mune iyo iPhone. Simply patinenge tichiridza zvemukati medu, kana nekukurumidza kana tichida, tiri kuzokwidza iyo Kudzora Center yeApple Watch. Ipapo Tichadzvanya pane iyo «AirPlay» icon iyo inoratidzwa mukati meControl Center uye zvishandiso zvinoenderana zvichaonekwa, kazhinji maAirPods anobatana akazvimiririra, asi isu tine mamwe anowirirana asina waya nzeve.
Uye pakupedzisira, Kutenda kune tekinoroji yeLTE yakaverengerwa muApple Watch isu tichakwanisa kuburitsa maPodcasts kuburikidza neiyi nhare yedhata. Izvo zvirinani kuve nehukama hunoshanda uye kuve neEIM yakavhurwa uye yakapetwa isina waya mahedhifoni isu tinokwanisa kutamba maPodcasts chero patinenge tiri, ndiko kubatsirwa kwekuti chishandiso ichi chasvika natively uye chakanyatsobatanidzwa neese mawatchOS 5.0, saka inoshanda nemazvo.
Heano maitiro aunogona kuwana zvakanyanya kubva Podcasts pane yako Apple Watch, Asi kana iwe uine chero mibvunzo, unogona kuisiya mubhokisi remashoko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Yekupedzisira Nhungamiro yekushandisa maPodcast pane Apple Watch
Wynd Plus anowirirana neIOS ekuchenesa mweya
Chinotevera chiitiko cheApple chinopemberera Zuva reVakadzi Venyika